क्वालकमको चिपमा भएको कमजोरीले ३० लाख प्रयोगकर्ताको डाटा जोखिममा, तपाईँको के छ ? - Technology Khabar
» क्वालकमको चिपमा भएको कमजोरीले ३० लाख प्रयोगकर्ताको डाटा जोखिममा, तपाईँको के छ ?
एन्ड्रोइड फोनमा प्रयोग गरिएको क्वालकम चिपले करिब ३० लाख प्रयोगकर्ताहरूको डाटा जोखिममा पारेको छ।
सेक्यूरिटी एनालाइज गर्ने संस्था चेकपोइन्ट सुरक्षाका अन्वेषकहरूले क्वालकमको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर चिपमा ४०० वटा त्रुटि भेट्टाएका छन्।
क्वालकम चिप स्मार्टफोन मार्केटको ४० प्रतिशत फोनहरुमा प्रयोग गरिन्छ र तिनीहरू बिभिन्न मूल्य कोटीका फोनहरूमा भेटिन्छन्। यो मात्र होईन, क्वालकम चिप गूगल, सामसङ, एलजी, शाओमीसहित अन्य धेरै प्रीमियम फोनहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
चेकपोइन्ट अन्वेषकले डीसीपी चिपको परीक्षण गरेको थियो भने त्यसमा त्रुटिहरूसहितको ४०० कोड टुक्राहरू पत्ता लगायो।
यस त्रुटिका कारण, ह्याकरहरूले कुनै पनि प्रयोगकर्ताको अन्तरक्रिया बिना नै कुनै पनि स्मार्टफोनमा जासूसी गर्न सक्ने बताईएको छ। यसले ह्याकरलाई प्रयोगकर्ताको फोटो, भिडियोहरू, कल रेकर्डिङ्गहरू, रियलटाइमको माइक्रोफोन डाटा, जीपीएस तथा लोकेसन डाटामा पहुँच दिन्छ ।
त्रुटिको कारण खराब अनुप्रयोगले कल रेकर्ड गर्न सक्छ, वा माइक्रोफोनको सहयोगमा जासुसी गर्न सक्दछ।
यो मात्र होईन, एक ह्याकरले सेवा अट्याकको माध्यमबाट फोनलाई फ्रिज गर्न अर्थात नचल्ने बनाईदिन सक्दछ। यस तरीकाबाट फोनको डाटा सँधैका लागि रहनेछ।
यस बाहेक, ह्याकरले अर्को खतरनाक गतिविधि कार्यान्वयन गर्न सक्दछ। यसको साथ, उसले फोनमा मालवेयर र मालिसियस कोड राख्न सक्छ, जसले ह्याकरको गतिविधि लुकाउनेछ तर त्यो कोड मेटिने छैन।
क्वालकमद्वारा यी त्रुटिहरू पत्ता लागेसँगै चेतावनी जारी गरिएको छ।
‘यी कमजोरीहरू फोन निर्माणकर्ताहरूबाट अपडेट दिएर मात्रै हटाउन सकिन्छ। हामीले चेकप्वाइन्टले पत्ता लगाएका कमजोरीहरूको परीक्षण गरिसकेका छौं र यससम्बन्धी कार्यहरू पनि गरेका छौं, तर अहिलेसम्म हामीसँग कुनै प्रमाण छैन कि कसैले यसको दूरुपयोग गर्यो,’ कम्पनीले भनेको छ ।
चेकपोइन्टले सबै मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूलाई उपकरण अपडेट गर्न आग्रह गरेको छ। एजेन्सी